သက်ဝေ: မျှော်လင့်ခြင်း (ပုလဲသီ တစ်ကွဲစီ)
မိုးပေါက်တွေအောက်. . .
ငွေနှင်းဖြူတွေအောက်. . .
ရွက်ခြောက်ပင်အောက် . . .
ဒါပေမယ့်လဲ . . .
မိုးပေါက် နှင်းပေါက် ရွက်ခြောက်တွေနား
တွေဝေ တွေးတော ရင်မောရသည်
Posted by သက်ဝေ at 5:47 PM
တန်ခူး January 25, 2008 at 6:35 PM
ChIr0N January 25, 2008 at 6:43 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး သက်ဝေ။ ကာရန်လေးတွေ တလုံးချင်း ချိတ်သွားတာလေးရော သဘောကျတယ်ဗျာ။ အားပေးနေပါတယ်နော်။ နောက်လဲ ကဗျာလေးတွေ ရေးပါဦး။
Chit Lay Pyay January 27, 2008 at 3:14 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ၊ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ သက်ဝေတစ်ယောက် မတန်ခူး ပြောသလို ပုလဲတွေ တစ်တွဲမက သီပေးမယ့် ချစ်သူနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆုံတွေ့ နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်